I-china die ikhupha i-aluminium bulkhead light manufacturers kunye nabathengisi | I-P & Q
I-Samsung 5630 ikhokelwe> 95lm / w
Ukufa i-aluminium + emhlophe kwi-PC diffuser
Umsebenzi okhoyo: Inzwa, imeko engxamisekileyo
Ukufakwa okanye Imiyalelo yeNdibano
Nceda ufunde le miyalelo yokuFakela ngononophelo ngaphambi kokufaka okanye ukugcina oku
Izixhobo. Le miyalelo kunye neMimiselo yaseKhaya (apho kufanelekileyo), NguGunyaziwe oGunyazisiweyo kunye noLayisenisi.
Kubalulekile-Imveliso kufuneka igcinwe kwaye iSebenze ngokuhambelana neMiyalelo yokuThenga, ukusilela ukwenza oko ukuze kungonakalise imveliso kunye neenkonzo. Kuyacetyiswa ngokuQatha ukuba eli Nqaku libalulekileyo lidluliselwe kuMnini okanye kwi-Operator yoFakelo ngeXesha lokuGunyazisa iSiza. Ukuziqhelanisa nokuLungileyo akucebisi Ukusetyenziswa kweeMveliso ezingama-24/7 Ngaphandle kokuSetyenziswa kweeXesha zoTshintsho ezifanelekileyo. I-P & q ayiphenduli kuyo nayiphi na imveliso engagcinwanga ngokuhambelana nayo
Iinkqubo ezicetyiswayo. Zonke iiMveliso kufuneka zicocwe ngokucokisekileyo kwisiseko esiQinisekileyo sokuQiniseka kokuSebenza ngokuBumbeneyo, kunye noMbane, umatshini kunye nokuQiniseka koLwakhiwo njengoko kuyiliwe, kugcinwa kuyo yonke iNkonzo yoBomi beMveliso.
“Thetha neGcisa eliQinisekileyo ukuze uQinisekise ukuba uMqhubi weSekethe oLungileyo”
Isiphoso soMbane Ukufumana nokuHlala
Unikezelo kufuneka lubekelwe bucala ngaphambi kokuvula iLuminaire. Ukuba lonke uqhagamshelo luqinisekisiwe ukuba luchanekile, imeko yeemveliso inokuba nesiphumo esibi kwiiComputer. Ukuba oku kuyimeko Nceda unxibelelane noMboneleli wakho ukuze afakelwe endaweni efanelekileyo. Nasiphi na isiphoso ekufumaneni kufuneka senziwe nguGunyaziwe oQeqeshiweyo, kwaye ukuba uyenziwa kunye neLuminaire endaweni, phantsi kwemvume yokuSebenza. Ngokutshintshwa kwalo naliphi na icandelo uQinisekise ukuba iiNgcingo kunye neeNxibelelwano ziJongiwe, Kwaye Nayo nayiphi na i-Wire Sleeving Refitted.
Egqithileyo Indibano yeemveliso ezigqityiweyo kunye neemveliso ezigqityiweyo
Okulandelayo: Ukukhanya kwemizi mveliso